Chikumbiro chekopi chevashandisi vekumba veNextcloud | Linux Addicts
Diego ChiGerman Gonzalez | 04/11/2021 19:11 | General, Free Software
Nextcloud ndeimwe yeaya mapurojekiti ayo asina chete chinhu chekuitira shanje software, asi vazhinji vanogadzira hardware vanoiunza sechikamu chezvigadzirwa zvavo. Iyo yakazara Cloud mhinduro yekubudirira uye kushanda pamwe chete iyo inogona kukwikwidza zvakaenzana neGoogle Workspaces kana Microsoft 365.
Kunyangwe iyo mari ichibva mukushambadzira kwemakambani mhinduro, mushandisi wepamba kana mabhizinesi madiki anoda kutora dambudziko kuti adzidze kuisa nekuibata pane yavo server, vanogona kuishandisa mahara.
Zviri nevashandisi ava mupfungwa kuti vagadziri vachangobva kuita a new ad. Nextcloud Backup, zvichave a yakazara encrypted incremental backup mhinduro iyo isiri nyore chete kushandisa, asi inopa yakazara yakazara seti inosanganisira yakafara sarudzo dzekuchengetedza uye kugona kutsvaga kuburikidza nekuchengetedza kuti uwane ega mafaira uye maforodha kana kudzoreredza kwakazara kusingadiwi.
Sezvandambotaura, kubva kuNextcloud vakasimbisa izvozvo iyo software yakagadzirwa nevashandisi vekumba mupfungwa, pamwe chete nemabhizinesi emhuri madiki, avo vangangove vasingazove vatengi vanobhadhara.
Sekureva kwaMaxence Lange, iyo Nextcloud software mainjiniya anove anotungamira mugadziri weiyo Backup app:
Mabhizinesi anoshandisa zvine simba asi zvakaoma kuchengetedza mhinduro kupa chengetedzo yedata yavanogovana neNextcloud.
Kune vashandisi vega, idzi mhando dzemhinduro dzinowanzo kuwandisa. Yedu nyowani backup application inopa inoshamisa nzira yakapusa yekuona kuti kunyangwe mumamiriro ezvinhu akaipisisa, sekurasikirwa kwesevha yesevha, data yakachengeteka pane shamwari kana muenzaniso wehama, kuchengetedza, chokwadi, kuvanzika kuburikidza nekunyorera.
Kubva ndichinyora muAddicts Linux, ndataura nezvemapurojekiti mazhinji ane vhezheni yekambani uye nharaunda vhezheni. Inguva yekutanga kuti chero wemaneja anotarisira vashandisi veiyo yega-yakagadzirirwa vhezheni.
Zvido zvevashandisi vepamba zvinowanzosiyana zvakanyanya neizvo zvevashandisi vebhizinesi hombe. Vagadziri vanowanzo tenda kuti zvakakwana kutevedzera zvirevo zverezinesi nekuburitsa kodhi. Asi, kazhinji zvinyorwa hazvina kukwana, zvechinyakare uye zvakaoma kunzwisisa.
Zvakaitika kwandiri neNextcloud (ini handisi kuti imhosva yavo) pakuedza kuisa Collabora Hofisi kana OnlyOffice. Zvakandipa chimwe chikanganiso chandakanga ndisingakwanisi kugadzirisa. Mwedzi mitanhatu gare gare, kuisa chimwe chirongwa, ndakawana mhinduro. Worse yaive neimwe open source project inonzi Mautic. Ndaifanira kutarisa zvidzidzo zvishanu zvakasiyana kuti ndipedze kuisa.
1 Iyo itsva Nextcloud kopi chishandiso inoshanda sei
2 Zvimiro zviripo parizvino
Iyo itsva Nextcloud kopi chishandiso inoshanda sei
NeNextcloud Backup, mushandisi anofanira kutsvaga mumwe akavimbika ane yake Nextcloud server uye kumukumbira kuti amugadzirire mushandisi account. Iwe unogona ipapo kumisikidza iyo application kuti ugare uchichengeta yakamanikidzwa uye yakavharidzirwa backups yedata rako pane Nextcloud server. Kana chimwe chinhu chikatadza, kuisirwa kwese kana mafaera ega nemaforodha anogona kudzoserwa.
Iyo nyowani yekushandisa, ikozvino mubeta, ichave iripo neayo akazara kushanda neNextcloud vhezheni 23.
Zvimiro zviripo parizvino
Chengetedza ma backups pane imwe Nextcloud server. Iyo imwe sevha inogona, asi haifanire kuve neiyo Backup application yakaiswa
Chengetedza ma backups mudura rekunze, senge FTP, SMB, WebDAV kana chero imwe protocol inotsigirwa neNextcloud. Ivo vanogona zvakare kuchengetwa pane yemuno drive, senge USB drive yakabatana kune server.
Ita zvinyorwa uye / kana otomatiki backups, yakarongwa mumabhendi enguva
Chengetedza iyo yese Nextcloud yekumisikidza, kusanganisira marongero, maapplication, uye data.
Ita inowedzera kana yakazara backups kumashure.
Ita kudzvanya uye encryption sarudzo (asi inokurudzirwa uye inogoneswa neiyo default)
Tumira kunze kiyi yekuvharidzira uye rumwe ruzivo rwekugadzirisa kune faira kana clipboard kuti uchengetedze.
Ratidza mu-app zviziviso nezve backup chiitiko
Usasanganise maforodha kubva mugadziriro kana .nobackup faira raiswa mufolder
Dzora kubva pamutsetse wekuraira kuti uwane uye udzorere mafaera ega, tanga kudzoreredza kuzere, kana kunyora uye kugadzira backups
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » A Copy App yeNextcloud Home Users
Imwe nzira kune Android. Iyo GrapheneOS inoshanda sisitimu